बाेल्ड आवाज-दबदबा व्यक्तित्व, कसरी बनाउने दम्दार आवाज ?
असार ३, २०७६ सारङ्गी न्यूज
मानिसको व्यक्तित्व लुवाई खुवाईसँगै बोलीचालीमा पनि विशेष निर्भर रहन्छ । तपाईं आफुलाई भलात्मी र बोल्ड रुपमा प्रस्तुत गर्न चाहनु हुन्छ भने आवाजलाई पनि ध्यान दिनु होला । आवाजले पनि मानिसको व्यक्तित्वलाई प्रभाव पर्दछ ।
तपाईं यदि रेडियोमा उद्घोषक बन्न चाहनु हुन्छ भने वा नयाँ ठाउँमा आफ्नो दबदबा बनाउन चाहनु हुन्छ भने भारी आवाजमा बोल्दा तपाईंका लागि सहयोगी बन्न सक्छ । कसरी आवाजलाई सुमधुर र बोल्ड बनाउने भन्ने विषयमा थुप्रै जानकारी छन् । यद्यपि, केही अध्ययनबाट के कुरा पत्ता लागेको छ भने श्वासलाई नियन्त्रणमा लिन सक्नु र यसमा कर पाउनु उत्तम उपाय देखिएको छ । आवाजलाई सुमधुर र भारी बनाउनका लागि अपनाउन सकिने केही उपायबारे जानकारी राखौँ ।
१. आजावलाई प्रोजेक्ट गर्नु
क) सिसाको अगाडि उभिएर बोल्नुहोस्
सिँधै उभिनुहोस् र आफ्नो बोल्ने बानीको विकास गरिरहनुस् । तपाईं आफ्नो नाम आफैँ उच्चारण गरेर सुन्नुहोस् । यसका साथै तपाई कुनै पनि पुस्तक वा समाचार पत्रको केही पन्ना पढ्ने गर्नुहोस् । आफ्नो आवाजको भोल्युम, टोन, सास तथा विशेष गरी आवाजको पिचमा ध्यान दिनु होला ।
ख) गलालाई आराम दिनुहोस्
तपाईंले सामान्यभन्दा धिमा आवाजमा बोल्ने प्रयास गर्नु भयो भने आवाज बिचमा टुट्ने सम्भावना कम हुन्छ । गलालाई जति आराम दिन सक्नुहुन्छ, त्यति दिनुहोस् । जसले गर्दा तपाईको भोकल कर्डस कसिलो बन्न पाउँदैन ।
ग) वाचनको अभ्यास
आफुलाई मन पर्ने किताब वा लेखको कुनै पन्ना छान्नुहोस् । उक्त पन्नामा लेखिएका वाक्यहरुलाई बिस्तारै धिमा आवाजले पढ्ने प्रयास गर्नुहोस् । यदि तपाईंले छिटो छिटो पढ्नु भयो भने तपाईंले आफ्नो आवाजले शब्दहरुलाई टिप्न नसकेको र कमजोर महसुस गर्नु हुनेछ । पेटबाट श्वास लिँदै पढ्ने अभ्यास गर्नु भयो भने आवाजमा सुधार आउने छ ।
घ) गुनगुनाउने प्रयास गर्नुहोस्
गलाको भित्रबाट गुनगुनाउने अभ्यास गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाईंले ओठलाई खोल्नुहोस् र चिउडोलाई छातीको लेबलमा राखेर आवाजलाई सानो बनाउँदै लैजानुहोस् ।
२. सावधानी अपनाउनुहोस्
आवाजलाई तिखो तरिकाबाट जबरजस्ती सफा गर्ने प्रयास नगर्नुहोला । यसले तपाईंको समयसँगै आवाज पनि बिग्रन सक्छ ।तपाईंको आवाजमाथि दबाब हुने खालका आवाज ननिकाल्नु होला ।
तपाईंको आवाज चर्को खालको छ भने त्यसलाई परिवर्तन गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् । अथवा आवाजमा दबाब पर्ने खालको आवाजको प्रयास नगर्नु होला
यस्तै धेरै चिसो पानी पिउनाले पनि तपाईंको स्वर नली कसिन्छ अर्थात बस्न सक्छ । जसले तपाईंको आवाज बिग्रन सक्छ l
मगलवार, असार ३, २०७६, ११:०६:००